२०७७ श्रावण २३ शुक्रबार ०५:५०:००
स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि डोल्पाको जगदुल्ला पुगेका डा. गोविन्द केसीलाई आफूहरूले अवरोध नगरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नारसिंह रोकायले बताएका छन् । १३ साउनमा जगदुल्ला–६ रिमी स्वास्थ्य चौकी पुगेका डा. केसीलाई सामान्य सोधपुछ गरे पनि शिविर सञ्चालनमा अवरोध नपुर्‍याइएको उनले बताए ।
‘उहाँ आएको जानकारी पाएपछि वडाध्यक्ष भक्तबहादुर बुढाथोकीलाई कुन संस्था, कहाँबाट आउनु भएको हो भनेर सोधपुछ गर्न लगाएको भने सत्य हो,’ रोकायले भने, ‘हामी पनि आवश्यक सहयोग गरौँला भनिएको हो । शिविर सञ्चालन गर्न नदिने र आधिकारिक अनुमति लिन भनिएको होइन ।’
वडाध्यक्षसँग डा. केसीले आफू कुनै राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नभई स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतमा स्वतःस्फूर्त सेवा गर्न आएको बताएको रोकायले जानकारी दिए ।
१३ साउनमा स्वास्थ्य चौकी पुगेका डा. केसी भोलिपल्ट ८० जना बिरामी जाँचेर आफूलाई असहज भएको बताउँदै १५ साउनमा जुम्ला फर्किएका थिए । जुम्ला पुगेर उनले जगदुल्लाका जनप्रतिनिधिको व्यवहारप्रति विरोध जनाएका थिए ।
डा. केसीको स्वास्थ्यसूचक खराब हुँदै
डा. केसीको अनशन ११औँ दिनमा
डा. केसीलाई धर्मशालाबाट अस्पताल सारियो : स्वास्थ्य बिग्रिँदै, श्वास फेर्न पनि समस्या